Tag: youtube analytics | Martech Zone
YouTube Analytics iri Pano
China, December 1, 2011 Chitatu, Kukadzi 22, 2017 Douglas Karr
Kana usati watombopinda, YouTube yakagadziridza Insights package kune nyowani, yakazara yakazara analytics package. Heano mamwe ezvazvino maficha muYouTube Analytics: Peji yakanaka yekutarisa. Mune-yakadzama kumhan'ara iyo inosanganisira yekudyidzana manhamba sekuyerwa nekufarira, kusada, makomendi uye zvido zvinowedzerwa kana kubviswa. Mavhidhiyo epamusoro ari kutyaira zvakanyanya kutariswa uye kunyorera. Chirevo chitsva chekuchengetedza vateereri chinoratidza kureba kuburikidza nemavhidhiyo vatariri vako
Teedzera Yako Youtube Mavhidhiyo
Muvhuro, July 13, 2009 Chitatu, Kukadzi 22, 2017 Douglas Karr
Vanhu vazhinji havazvizive, asi Youtube ine yakakosha analytics yekuti iwe uteedzere ako mavhidhiyo. Kana iwe uchida kukwanisa kuona kuti ndiani anovapinza uye mangani emitambo yavakawana, zviri nyore kushandisa chishandiso cheYouTube Insight. Kutanga, pinda muAccount yako yeYouTube uye sarudza imwe yemavhidhiyo ako. Iwe uchaona Insight bhatani kurudyi padivi repashure: Tevere, sarudza Kuwana uye iwe unowana menyu yesarudzo: Sarudza Yakaiswa